Nhau - STATEMENT
Vadiwa bhizinesi vadyidzani nevatengesi,
Munguva pfupi yapfuura, zvakawanikwa kuti kune makambani uye vanhu vanoshandisa zvisiri pamutemo zita rekambani nekero (Shijiazhuang Mets Machinery co., Ltd NO.1 Changjiang Road Shijiazhuang 050035 Hebei China Tel: 86-311-68058177) nerumwe ruzivo rwekambani ku tumira maemail kunzanga uchikumbira ma invoice, odha ruzivo nezvimwewo .. Mabhizinesi mazhinji akagamuchira maemail akadaro asingazive chokwadi akabvunza kambani yedu nezve email kakawanda, uye takavatsanangura nokushivirira.
Maitiro ari pamusoro apa zvisiri pamutemo ekunyepedzera kushandisa ruzivo rwekambani haungokonzere kukanganisa kwakanyanya kukambani yedu, asi zvakare kunokonzeresa njodzi yakavanzika kune iyo kambani inogamuchira maemail ekunyengerwa. Kuti tidzivise izvi kuti zvirege kuitika zvakare, tinozivisa zvine mutsindo zvinotevera:
Ini hatizive hunhu hwevashandi zvisiri pamutemo hwekushandisa ruzivo rwekambani kusunungura maemail kunharaunda, uye maemail ari pamusoro haana chekuita nekambani yedu.
2. Kambani yedu haina kumbobvumidza chero kambani kana mumwe munhu kunze kwekambani yedu. Kuti udzivise kunyengerwa, bhizinesi rinogamuchira iyo email rinogona kubvunza zvakananga nekutisheedza kuti tione chokwadi. (Inotarisirwa nekambani foni: 0311-68058177.)
3. Kuti tirange mhosva iyi, kambani yedu yakamhan'ara nyaya iyi kubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu nezviito zvataurwa pamusoro apa zvisiri pamutemo, uye isu takamirira rubatsiro kubazi rezvekudzivirirwa kweruzhinji mukuferefetwa.
Mukupfupisa, kambani yedu ndeyebhizinesi rinotarisa pane slurry pombi zvigadzirwa nemasevhisi kwemakore mazhinji. Iyo kambani inogara ichitarisa mhando yechigadzirwa seye hupenyu hwekambani, inonamatira kune mutengi-centric inoshanda musimboti, ichishandisa yakazara yakazara zvikamu zvekuchengetera uye nyanzvi kwazvo mushure-yekutengesa timu kushandira indasitiri yezvicherwa uye nzanga.
Isu tinozivisa izvi!